Nuxurka WWDC 2017 wuxuu kugu sugayaa YouTube | Wararka IPhone
Hadda waxaad ka arki kartaa fiidiyowga buuxa ee muxaadarada WWDC YouTube
Muhiimadda u banneysay shirkii sanadlaha ahaa ee horumarinta Apple ayaa la soo saaray Isniintan la soo dhaafay Xarunta Shirarka McEnery ee San José, California. Sidaas ayaa Apple ku soo noqotay, 15 sano ka dib, inay dib ula wareegto magaaladan goobtii WWDC kadib daabacaadyo badan oo lagu qabtay San Francisco. Wuxuu ku sameeyay iridda hore, iyadoo mid ka mid ah bandhigyadii ugu dhammaystiran ee dhowaan lagu xasuusto dhacdadan.
Cusbooneysiinta MacBook Pro, iMac Pro cusub oo aad u awood badan, oo ku saabsan dhammaan nidaamyadeeda hawlgalka iyo, dabcan, HomePod cusub oo la soo bandhigay taas oo si adag ugu heellan muusikada iyo aaladaha casriga ah ee guriga ku jira. Waxaas oo dhan ku dhowaad laba saacadood iyo badh soo bandhigid ah halka warka lagu soo bandhigay si dhakhso leh, oo deg deg ah oo aan hakad lahayn.
Haddii aad wax seegtay inta lagu gudajiray dhacdada tooska ah oo aad rabto inaad dib u aragto, ama aad awoodi kari weyday inaad si toos ah ula socotid duruufo jira awgeed, hadda waad awoodi kartaa. toos uga socda YouTube. Ka dib markii fiidiyowga la heli karo maalmo kooban oo si gaar ah boggiisa internetka, Apple ayaa u soo gelisay kanaalka YouTube-ka oo ah nuxurka WWDC 2017 qofkasta oo raba inuu dib ugu noolaado wixii ka dhacay Isniintii la soo dhaafay magaalada Californian ee San José.
WWDC waxay horey u xirtay albaabadeeda ilaa sanadka soo socda, laakiin baarka ayaa la dhigay meel sare oo horumarada cusub ee soo socda ayaa si xiiso leh looga sugayaa adduunka. Nasiib wanaag anaga Waxaan horeyba u awoodnay inaan tijaabino qaar ka mid ah wararka ku saabsan iOS 11 iyo WatchOS 4 oo waxaannu kugu martiqaadeynaa inaad wax walba ka ogaatid noocyadan ugu horreeya ee nidaamyada cusub ee Apple ku shaqeeya sidoo kale kanaalkayaga YouTube.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » macruufka » macruufka 11 » Hadda waxaad ka arki kartaa fiidiyowga buuxa ee muxaadarada WWDC YouTube
IPhone 8 waxaa laga yaabaa inuusan laheyn modem xawaare Gigabit ah